ထိန်သိမ်း နှင့် တောင်တော်အမွေး နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Pneumatic Actuator > နှစ်ချက် ခေတ္တ Pneumatic Actuator > ထိန်သိမ်း နှင့် တောင်တော်အမွေး နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator
AOX-P ကို ကို စီးရီး ထိန်သိမ်း နှင့် တောင်တော်အမွေး နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumတစ်ဦးtic တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r များမှာ အသုံးချ သို့ လိပ်ပြာ အဆို့ရှင်, အလုံး အဆို့ရှင်, dတစ်ဦးmpers သို့မဟုတ် rotတစ်ဦးry mတစ်ဦးchတွင်es.AOX လိမ့်မည် အောင် ကြီးမားသော ပံ့ပိုးမှုများကို သို့ အဆိုပါ အနာဂတ် နှင့် အဆိုပါ အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး AOX-P ကို ကို စီးရီး ထိန်သိမ်း နှင့် တောင်တော်အမွေး နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumတစ်ဦးtic တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r, အသစ်က နည်းပညာ နှင့် ဆက်လက်နေသော cusသို့mer ဝန်ဆောင်မှု, နှင့် ကြိုးစား သို့ ဖြစ်လာသည် တစ်ဦး globတစ်ဦးl leတစ်ဦးder တွင် vတစ်ဦးlve တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးtion တွင်dustry တွင် အဆိုပါ 21 ရာစု။
မြင့်မားသောအပူချိန်: -20Â° C- + 150Âဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
1. သိုလှောင်ဆင် AOX-P ကိုစီးရီးထိန်သိမ်းခြင်းနှင့်တောင်တော်အမွေးနှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic များအတွက် & တောင်တော်အမွေးဒီဇိုင်း actuator ။
အဆိုပါသိုလှောင်ဆင် & တောင်တော်အမွေး ထိုသူနှစ်ယောက် piston stably ဖျော်ဖြေဖို့အချိုးကျဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းနှင့် လျှင်မြန်စွာမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်မြင့်မားသောပါဝါ output ကိုအတူ။
2. နွေဦး ။
3. ခရီးသွား AOX-P ကိုစီးရီးထိန်သိမ်းခြင်းနှင့်တောင်တော်အမွေးနှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator များအတွက်ရပ်လိုက်နိုင်သည်။
အဆိုပါနှစ်ဦးကိုတစ်ဦးတည်းသော ပြီးသား installed ထားပြီးဖြစ်သော actuator ၏ဘေးထွက်မျက်နှာပြင်မှာ screw နှစ်ခုညှိ ယင်းအဆို့ရှင်အပျေါအဆို့ရှင်အဖွင့်များ၏တည်နေရာများညှိနှိုင်းမှုစေနိုင်ကြောင်းနှင့် ပိုပြီးအဆင်ပြေပြေနဲ့တိကျမှန်ကန်ပိတ်။
အဆိုပါလေကြောင်းအရင်းအမြစ်ဖိအားလေကြောင်းဝင်ပေါက် (2) အနေဖြင့်နှစ်ဦးကို piston အကြား AOX-P ကိုစီးရီးထိန်သိမ်းခြင်းနှင့်တောင်တော်အမွေးနှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ကြွလာနှင့်ဆလင်ဒါကိုယ်ခန္ဓာ၏အဆုံးဆီသို့ piston တွန်း။ အဆိုပါ piston နှင့်ဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးစွန်းတိုင်အောင်အကြားလေကြောင်းလေကြောင်းဝင်ပေါက် (4) မှဖြန့်ချိသည်။ လေထုအရင်းအမြစ်ဖိအားလေကြောင်းဝင်ပေါက် (4) ကနေဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးစွန်းသို့ကြွလာခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိနှစ်ခု piston အကြားလေကြောင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဘက် piston တွန်းလျှင်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင် piston ၏ထိန်သိမ်း, တစ်ပြိုင်နက် output ကိုရိုးတံ anticlockwise (ဂီယာဘီး) ကိုလှည့် လေကြောင်းဝင်ပေါက် (2) မှစ. , output ကိုရိုးတံ (ဂီယာဘီး) လက်ယာရစ်လှည့်ရန်တစ်ပြိုင်နက် piston ၏ထိန်သိမ်းခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်မည်ဖြစ်သည်။ (ထို piston တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေကွဲပြားခြားနားသောဦးတည်ချက်အတွက်စုဝေးနေကြသည်လျှင်, output ကိုရိုးတံအမည်ရနှစ်ဆသရုပ်ဆောင် DLtype reverse, ပြောင်းပြန်ဦးတည်လှည့်ထွက်လှည့်လိမ့်မယ်)
1 ။ ကျနော်တို့ကပြည့်စုံထုတ်ကုန်များ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-P ကိုစီးရီးထိန်သိမ်းခြင်းနှင့်တောင်တော်အမွေးကြောင်းသေချာစေရန်အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးခြင်းမှုစနစ် နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator တိုင်းကုန်ထုတ်မှာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း ဇာတ်စင်။
2. ကျွန်ုပ်တို့သည်စံရှိ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်။ တစ်ခုချင်းစီကို AOX-P ကိုစီးရီးထိန်သိမ်းခြင်းနှင့် တောင်တော်အမွေးနှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator မတိုင်မီထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းကိုခံယူပါလိမ့်မယ် စက်ရုံစွန့်ခွာ။ ကျနော်တို့3နှစ်နီးပါးမျှဖောက်သည်တိုင်ကြားမှုများရှိသည်။
3 ။ကျနော်တို့ကလျင်မြန်စွာပြီးနောက်-ရောင်းအားရှိ တုန့်ပြန်ယန္တရား။ ကျနော်တို့ပြီးနောက်-အရောင်းကိစ္စရပ်များတွင်ဖောက်သည်တုံ့ပြန်ချက်ကိုလက်ခံရရှိတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ ပြဿနာများကိုရှာဖွေအလျင်အမြန်ဖြေရှင်းချက်များကိုနည်းပညာစီစဉ်ပါလိမ့်မယ်။
မေး: သင်သည်သင်၏ AOX-P ကိုစီးရီးထိန်သိမ်းခြင်းနှင့်တောင်တော်အမွေးနှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ဘို့မဆိုလက်မှတ်ကိုရှိပါသလား?
မေး: ရသောနိုင်ငံများထံရောင်းချသည်သင်၏ AOX-P ကိုစီးရီးထိန်သိမ်းခြင်းနှင့်တောင်တော်အမွေးနှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ရှိပါသလဲ
hot Tags:: ထိန်သိမ်း နှင့် တောင်တော်အမွေး နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်